लिम्वूवान - विविध सामग्री: चन्द्रमामा मान्छे पुगेकै छैन त ?
१९६९ को ग्रीष्म ऋतु । आठ-आठ दिनसम्म लाखौं मानिस आश्चर्यलोकमा परे । मानिसले चाहेमा असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन भन्ने कुरा सावित भयो । चन्द्र धरातलमा मानव अवतरणको समाचारले मानव जातिले आफ्नो इतिहासमा नौलो आयाम थपेको अनुभव गर्‍यो । यसले अमेरिकाको अन्तरिक्ष कार्यक्रममा गौरव त थप्यो नै, सबै कुरा सम्भव छ भन्ने प्रमाणित भएपछि मानिसलाई थप प्रेरणासमेत मिल्यो । यो बीसौं शताब्दीको सबैभन्दा महान् प्राविधिक विजय थियो । तर, केही मानिसका लागि भने यो दाबी 'महान् झूठ' थियो । निल आर्मस्ट्रङ र बुज एल्डि्रनले चन्द्र धरातलमा पाइला टेकेको ४० वर्षपछि सन्देहवादी सिद्धान्तकारहरूले यस ऐतिहासिक घटनालाई फेरि जनइजलासमा ल्याउने प्रयास गरे । यी मानिसहरू नासाले आफ्ना सोभियत प्रतिस्पर्धीहरूलाई ठग्न र राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले १९६० को अन्त्यसम्ममा मानिसले सुरक्षित रूपमा चन्द्रलोक पुगी सुरक्षित रूपमै त्यहाँबाट पृथ्वीलोकमा र्फकने लक्ष्य राखी गरेको घोषणा पूरा गर्न यस्तो जाली काम गरिएको विश्वास गर्छन् ।
धार्मिक फिल्म निर्माता बार्ट साइब्रेल भन्छन्, 'म बुझ्छु, चन्द्रलोकमा मानिसले पाइला राखे भन्ने कुरा सोर्‍है आना झूठा हो, म मेरो ज्यानको बाजी थापेर यो कुरा झूठा हो भन्न सक्छु ।'
१९९९ मा गएको एक सर्वेक्षणअनुसार अपोलो-११ को चन्द्र धरातल अवतरणलाई असत्य ठान्ने अमेरिकीको संख्या निकै छ, अर्थात् ६ प्रतिशत अमेरिकी यस अभियानको दाबीमाथि शंका गर्छन् । र, सन्देहवादी सिद्धान्तकारहरूले छलकपट हो कि भन्ने प्रमाणित गर्ने क्रममा अनेक प्रमाण जुटाउने काम जारी नै राखेका छन् । बि्रटिस पत्रिका इन्जिनियरिङ एन्ड टेक्नोलोजीले गरेको सर्वेक्षणका उत्तरदातामध्ये २५ प्रतिशतले मानिसले चन्द्रलोकमा टेकेको दाबीलाई सत्य मानेका थिएनन् । अति थोरै वेबसाइट र ब्लगहरूले नासाको तथाकथित 'छलकपट' बारेका आशंकालाई ठाउँ दिएको पाइन्छ ।
वासिङ्टनस्थित नेसनल एअर एन्ड स्पेस म्युजियमका क्युरेटर रोजर लनियस भन्छन्, 'चन्द्रलोक पुग्ने कुरा बुझ्नु निकै कठिन कुरा हो । केही मानिसका लागि हामी चन्द्रलोक गएनौँ कि क्या हो भन्ने खालको उत्तर नै सजिलो हुन्छ । यीमध्ये सिधासादा भोलाभाला मानिस पनि पर्छन् । अपोलो अभियानसम्बन्धी यस्तो षड्यन्त्रसम्बन्धी सिद्धान्त १९७२ मा अन्तरिक्ष-यात्री चन्द्रमाबाट फर्केको लगत्तै जानकारीमा आएको थियो ।'
नासाको अपोलो कार्यक्रमका लागि रकेट इन्जिन बनाएका बिल केसिङ नामक एक प्राविधिक लेखकले १९७४ मा एक पुस्तक प्रकाशित गरे । पुस्तकको नाम थियो- 'हामीले कहिल्यै चन्द्रलोकमा पाइला टेकेनौँ ः अमेरिकाको ३० अर्ब डलरको धोकेवाज परियोजना हो यो ।' केसिङले पुस्तकभरि र अन्यत्र पनि नासाले सुरक्षित तरिकाले चन्द्रमामा पाइला टेक्ने प्रविधि नै विकास गर्न नसकेको दाबी गरे । उनले भने, 'अपोलो अन्तरिक्षविज्ञहरू पृथ्वीलाई वरिपरिबाट घेर्ने भ्यान अलेन नामको रेडियसनबाट गुज्रँदा विषको आक्रमणमा पर्न सक्थे । चन्द्रमाबाट ल्याइएका नासाका तस्बिरहरू शंकास्पद र नियमअनुरूपका देखिएनन् ।' केसिङले बताएअनुसार एपोलो-११ यानलाई दृश्यबाट ओझेल हुन्जेलसम्मका लागि माथि पठाइयो । त्यसपछि चन्द्रमामा जाने लुनार क्याप्सुल प्रक्षेपण गरी तीनजना यात्रुलाई सैनिक कार्गो प्लेनमा राखेर आठ दिनपछि त्यस प्लेनलाई प्रशान्त महासागरमा खसाली उद्धार गरियो । उनले नासाका अधिकारीहरूले नेभादाको उच्च सुरक्षा क्षेत्रको सैन्य इलाकामा रहेको एरिया नं ५१ मा चन्द्रमामा पाइला टेेकेको फिल्मांकन गरेको अनि अन्तरिक्षविद्हरूको सहयोग पाउन उनीहरूको दिमाग चाटेको दाबी पनि गरेका छन् ।
केही मानिसका विचारमा केसिङको सिद्धान्त १९७८ मा बनाइएको क्यापि्रकोर्न वानबाट प्रेरित रहेको छ । यस फिल्ममा नासाले मंगल ग्रहमा मानिस उत्रेको देखाइएको छ, जुन भूमि दुर्गम सैन्य शिविरको इलाकामा पर्छ । केहीले त नासाले '२००१: ए स्पेस ओडिसी' नामक हिट फिल्मका निर्देशक स्टान्ली कुबि्रकलाई भाडामा लिई चन्द्रमामा मानिसले अवतरण गरेको जाली फिल्मांकन गरेको ठानेका छन् । दशकौंपछि, षड्यन्त्रको सिद्धान्तः 'के हामीले चन्द्रमामा टेक्यौँ त ?' नामक प्रतिष्ठान खडा गरेको बताइन्छ, २००१ को फक्स टिभीको वृत्तचित्रमा नासाको एपोलोका तस्बिरहरू र टिभी फुटेजहरू पनि हालिएका छन् । तीमध्ये एक हो: मानिसको छाया ऊसँगै हिँड्नुको साटो यताउता गएको देखिनु, जसले प्रकाशको अप्राकृतिक स्रोत त्यहाँ थियो भन्ने जनाउँछ । र, त्यहाँ चन्द्रमामा नभएको हावाको झोक्काले अमेरिकाको झन्डा फहराइरहेको देखिन्छ । यसबाट स्टुडियोमा कृत्रिम प्रकाश र वायुको मद्दतले काम गरेर जाली तस्बिर खिचिएको शंका उत्पन्न हुने ठाउँ रहेको उनीहरू बताउँछन् । कतिपय डकुमेन्टमा एपोलो अन्तरिक्षयात्रीहरू भान अलेनपट्टिबाट मानिस छिटोछिटो हिँडिरहेको र विकिरणको खतरापूर्ण स्तरतर्फ लागिरहेको देखिन्छ, तस्बिरमा भएको छाया वाइडएन्गल लेन्सले बिगारेर चन्द्रामाको सतह भिरालोजस्तो देखिन पुगेको छ । एपोलोको झन्डा र तेर्सोपट्टि दिइएका टेवाका डन्डीले गर्दा झन्डा फहराइरहेको देखिन्छ । ००५ मा केसिङको निधन भयो । उनी बित्नुअघि नै चन्द्रलोकमा मानव अवतरणसम्बन्धी कुरा जाली हो भन्ने साइब्रेलले आशंका गर्न थालिसकेका थिए । साइब्रेल टेनेसीको न्यासभिलाका फिल्म निर्माता हुन् । कुनै अज्ञात दाताबाट रकम लिएर उनले ४७ मिनेट लामो वृत्तचित्र लेखे र निर्देशन पनि गरे । यसमा चन्द्रमामा मानिस पुगेको तथ्य वाहियात हो भन्ने कयौं आशंका देखाउने प्रयास गरिएको छ । तर, यस्तो आशंका गर्नेहरूका विरोधीहरू भने यदि त्यसो भए नासाका दसौं हजार कर्मचारी तथा एपोलोसम्बन्धित त्यतिका मानिसबाट यो कुरा चार/चार दशकसम्म लुकाउनु सम्भव नभएको जिकिर गर्छन् । तर, साइब्रेल भने एपोलो कार्यक्रम बनावटी भएको र नासाका मठ्ठीभर उच्च अधिकारी र अन्तरिक्षयात्रुलाई मात्र साँचो कथा थाहा हुने बताउँछन् । उनले कयौंपल्ट उनीहरूलाई ढुके, पासो हाले, बाइबल छोएर आफ्नो क्यामेराअगाडि कसम खान लगाए । तर, उत्तर पाए- 'बाइबलको कसम, हामी चन्द्र धरातलमा हिँडेकै हो ।'
अन युट्युबको एक भागमा साइब्रेल एल्डि्रनसँग विवाद गरिरहेको दृश्य पनि छ । २००२ मा प्रसारित यस दृश्यमा ३० वर्षे जोसिला साइब्रेलले ७२ वर्षीय वृद्ध एल्डि्रनलाई झूठो, बेइमान, चोर साला भनेर गाली गर्नासाथ एल्डि्रनले उनको मुखमा एक बज्रमुक्का बजाएर धकेलिदिएका थिए ।
एल्डि्रनले सिएनएनसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, 'अब त्यस्ताका पछि लागेर साध्यै छैन । आशंकावादीका पछि लाग्नेलाई त के भन्नु र खै ! कसैकसैले नजानेका कुरा कसैले अलिकति जान्यो भने त्यस विषयको अंग बन्ने मानिसको स्वभावै हो । तर, के गर्ने यसले मानिसलाई विचलित तुल्याउँछ । '
Posted by limbu at 11:37 PM